Norbert Ratsirahonana : Ampamoakan’i Camille Vital? -
AccueilRaharaham-pirenenaNorbert Ratsirahonana : Ampamoakan’i Camille Vital?
12/12/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Milaza ny hanao fanambarana goavana i Norbert Ratsirahonana amin’ity faran’ny herinandro ity. Antenaina araka izany fa hanao ampamoaka ny antony nisakanany ny jeneraly Camille Vital tsy ho kandidà mpisolo toerana an’i Andry Rajoelina, nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013 ny tenany…
Isan’ireo nahazo fanasana nanatrika ny lanonana fitokanana ny Azura Foulpointe-Toamasina ny jeneraly Camille Vital. Nanontany ity kandidà laharana faha-10 tamin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013 ity ny antony niverenany tamin’i Andry Rajoelina ny mpanao gazety nahazo izany fanasana izany. “Noho ny fiangavian’ny ranabavy Christine Razanamahasoa vao avy nivoaka ny hopitaly no nampiverina ahy…”, hoy ny jeneraly Camille Vital. Napetraka taminy ihany koa ny fanontaniana hoe: “fa naninona no tsy neken’i Andry Rajoelina tampoka teo ny naha kandidà anao kanefa nafarany avy tany Genève ianao fa ho kandidà mpisolo toerana azy?”. “Ratsirahonana no nanome loha an’i Andry Rajoelina niteny taminy hoe “fitondrana efa eo am-pelatanan’ny Merina ve omena Tanindrana indray”…!”, hoy ihany ity praiminisitry ny HAT teo aloha ity.
Notendrena ho ambasadaoro tany Genève ny jeneraly Camille Vital taorian’ny filankevitry ny minisitra HAT ny faha-28 jona 2012, rehefa nosoloin’ny praiminisitra Omer Beriziky ny faha-20 desambra 2011. Andro vitsivitsy talohan’ilay simena natao teny Andranomena naha lany ho filohan’ny TGV an’i Edgard Razafindravahy anefa dia nantsoin’i Andry Rajoelina nody an-tanindrazana ny jeneraly Camille Vital, fa hisolo toerana azy amin’ny fifidianana filoham-pirenena noho ny fisian’ny “Ni…Ni”. Efa nanomboka ny fivoriana sy fanomanana rehetra tao amin’ny trano fonenan’ny jeneraly Camille Vital tetsy Ivandry. Tampoka teo nefa nisy iny fifidianana anatiny teo amin’ny antoko TGV teny Andranomena iny, ka lany tamin’izany i Edgard Razafindravahy. Avy hatrany dia notsoahan’i Mamy Ravatomanga tao amin’ny jeneraly Camille Vital daholo ny zavatra rehetra efa natomboka. Naneho ny tsy fanoherany izany fanapahan-kevitra izany ny tale jeneralin’ny prezidansa, Mamy Ratovomalala ka dia noroahan’i Andry Rajoelina avy hatrany dia ireny niaraka nanangana ny antoko Hiaraka Isika ireny ny jeneraly Camille Vital sy Mamy Ratovomalala.
“…Fitondrana efa eo am-pelatanan’ny Merina ve homena Tanindrana indray”. Io teny io araka ny nambaran’ny jeneraly Camille Vital no nataon’i Norbert Lala Ratsirahonana, antony nandakàna azy tampoka tsy ho kandidà mpisolo toerana an’i Andry Rajoelina tamin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013. Fa iza tokoa moa izany ity Norbert Ratsirahonana ity?
Zafy Albert sy Didier Ratsiraka
Manamarina io teny nataon’ny jeneraly Camille Vital tany amin’i Azura Fouplpointe ve ireto tranga roa ireto? Naato tamin’ny andraikitra maha filoham-pirenena azy ny profesora Zafy Albert ny faha-5 Septambra 1996, rehefa avy naongan’ny solombavambahoaka maro an’isa, izay tsy iza fa i Norbert Lala Ratsirahonana, izay lasa filoham-panjakana mpisolo toerana sady lehiben’ny governemanta ihany no tao ambadik’izany “fanonganam-panjakana” izany. Mbola i Norbert Lala Ratsirahonana ihany koa no atidohan’ilay “1er tour” de vita” ny taona 2002 nahatonga ny amiraly Didier Ratsiraka voatery nanao sesitany ny tenany tany Frantsa.
Antenaina araka izany fa ho isan’ny zavatra hotenenin’i Norbert Lala Ratsirahonana mandritra izany fanambarana hataony amin’ity faran’ny herinandro ity izany ny mikasika io antony nandakàna an’i Camille Vital io. Marihina moa fa nenjehina sy namoahana IST mihitsy i Mamy Ratovomalala sy Camille Vital ny harivan’ny fanisam-bato, fihodinana voalohany tamin’iny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013 iny, ary i Andry Rajoelina mihitsy no niditra mivantana tamin’ny hainoamanjery nanitsakitsaka ny grady jeneraly teny am-bozonan’i Camille Vital, sy niampanga ity farany ho nikasa hamono ho faty an’i Marc Ravalomanana.